Microsoft yakaburitsa kodhi yekodhi yeGCToolkit | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakaburitsa iyo GCToolkit kodhi kodhi
Microsoft yakaburitsa mazuva mashoma apfuura nhau kuti yakaburitsa kodhi yekodhi yechishandiso chayo «GCToolkit», inova seti yemaraibhurari yekuparadzanisa mafaera eGava Marara Yekuunganidza, ane iyo yose GCToolkit kodhi inowanikwa paGitHub pasi peMIT rezinesi.
GCToolkit ine matatu ma Java module inovhara maAPIs, GC log file mafaera, uye Vert.x toolkit-based message backplate yekuvaka inoteerera kunyorera paJVM. Neichi chishandiso, vashandisi vanogona kugadzira zvinomisikidza uye zvakaomarara zviyero zvemamiriro ekuchengetedza memory muJVM.
Seizvo zita rinoratidzira, iyi seti yemaraibhurari ekuparadzanisa Java marara muunganidzwa (GC) mafaera egi nekuapatsanura mune dzakasiyana zviitiko. Fumura iyo API yekuvandudza kubatanidzwa iine toolkit uye data aggregation, iyi inobvumidza mushandisi kugadzira akaomarara akaomesesa mamiriro eiyo mamiriro eiyo JVM inochengetedzwa ndangariro.
Zvinoenderana nechikwata, iyi ndiyo nzvimbo yekupinda mushandisi muGCToolkit iyo inoviga ruzivo rwemamojuru emukati mune mashoma maitiro ekufona. Kuwedzera kune iyo API, pane mamwe maviri ma module: iyo module yekuisa uye Vert.x. Iyo Parser Module inoenderana neunganidzwa wezvenguva dzose zvirevo uye kodhi yakanyorerwa inofungidzirwa seyakasimba kwazvo GC log analyzer iripo.
Iyo mameseji backend yakavakirwa pa Vert.x inoshandisa mameseji mabhazi maviri: iyo yekutanga inotumira data kubva kune dhata sosi. Iyo yazvino kuitiswa inopfuura log mitsara kubva kuGC faira refaira. Vatengi vebhazi iri ndivo vaongorori vanoshandura iyo data kubva kune dhata sosi kuita zviitiko zvinomiririra GC kutenderera kana nzvimbo yakachengeteka. Izvi zviitiko zvakaburitswa pane yechipiri meseji bhazi: yechiitiko bhazi. Vanonyoresa bhazi rezviitiko vanogona kubva vaziviswa uye kugadzirisa zviitiko zvinovafadza.
Parser inoburitsa pachena disc zviitiko zveJVM, Kukubvumidza iwe kunyora kodhi kutora uye kuongorora data kubva kuzviitiko izvi. Kugonesa kubatwa kwedata uye kuongororwa kweGC mafaera egi, GCToolkit inopa yakapusa yekubatanidza fomati. Rudzi rwe data iro vashandisi vanoda kutora kana iyo mhando yekuongorora yavanoda kuita iri mukufunga kwemushandisi. Semuenzaniso, kutora zviitiko zvekumbomira kuti uongorore murwi wekugara, iyo aggregator inotora chiitiko ichi, ichiburitsa iyo yakakodzera data, uye ichipfuudza iyo data kune iyo aggregation.
Izvi zvinounza iyo data pamwechete mukuongorora kunonzwisisika, semuenzaniso kuzara kwemurwi mushure mekuunganidzwa kwemarara. Iyo inoguma data inogona kuiswa nenzira yegirafu, tafura, kana imwezve mushandisi-inoshamwaridzika fomati. Zvinotonyanya kukosha, sekureva kwechikwata, iyo suboptimal yekuunganidza dhizaini inoguma nechikumbiro icho chinoda zvimwe CPU nekurangarira, uku uchidzikisira ruzivo rwekupedzisira-mushandisi. Mune mamwe mazwi, muunganidzi asina kugadzirirwa anowanzoreva anodhura nguva yekumhanya nevashandisi vasina kugutsikana.
Nekukura kweMicrosoft kufarira papuratifomu yeJava, tarisa mune yakavhurika sosi iri zvakare kuwedzera mabhenefiti enharaunda yeJava. Mushure mekupa zvakakosha ku port MacOS M1 uye Windows kuArm, Microsoft yakasimbisa kuzvipira kwayo kuOpenJDK nekuunza yayo vhezheni yeOpenJDK uye kujoina iyo Eclipse Adoptium inoshanda boka (raimbozivikanwa seAdoptOpenJDK).
Nekugadzira GCToolkit yakavhurika sosi, Microsoft iri kuyedza kupa nzira iri nani yekuona vadzidzi veiyo JVM pamabatiro ainoita GC uye ndangariro kugoverwa. Kuonekwa kuri nani kunotendera zvirinani kugadzirisa, izvo zvinobatsira vese vekupedzisira vashandisi vechishandiso uye nehunyanzvi vashandi vane basa kune manejimendi ayo.
Iyo yakapusa API uye inyore-kushandisa-nzira dzekuburitsa nzira dzinovimbisa kugadzirisa basa rekuverenga GC matanda nekupa nzira dzakasiyana siyana dzekuongorora, kubvisa, uye kuona data.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakaburitsa iyo GCToolkit kodhi kodhi
Ventoy yakagadzirisa mabhugi mazhinji mushanduro dzayo dzazvino uye kune kunyange GUI yeLinux; hausisina chikonzero chekusashandisa
Debian Edu 11 anosvika aine akawanda eBullseye maficha matsva uye DuckDuckGo kudhizaina senge yekutsvaga injini